DeltaFosB-mediated dopamine အချက်ပြပြောင်းလဲမှုများသည်အလွန်အဆီကျသောအဆီဓာတ် (၂၀၀၈) မှပုံမှန်ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်း - Brain On Porn
Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008 ဒီဇင်ဘာ 1; 64 (11): 941-50 ။ EPub 2008 ဇူလိုင် 26 ။
Teegarden SL, Nestler EJ, ဘေးလ် TL ။
တိရိစ္ဆာန်ဇီဝဗေဒ, Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, Philadelphia တွင်, PA ဆိုပြီး 19104-6046, အမေရိကန်နိုင်ငံစီးဌာန။
ဆုလာဘ်မှ sensitivity မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုအဖြစ်ကျော်နှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူများအတွက် predisposing အချက်အဖြစ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ သို့သော် sensitivity ကိုဆုချဖို့ပံ့ပိုးအခြေခံယန္တရားကိုမသိရှိပါ။ ကျနော်တို့အကြိုးလှုံ့ဆော်မှုစနစ်ပုံမှန်မှပြုမူနိုင်မထွက်ရ dopamine အချက်ပြတစ်ဦး dysregulation ကြီးထွားဆုလာဘ် sensitivity ကိုတစ်ခုနောက်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်အံ့သောငှါတွေးဆ။
ကျနော်တို့ကအရေးပါတယ်လို့ High-အဆီအစားအသောက်များတွင်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအပြောင်းအလဲများဆနျးစစျဖို့, မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ FosB-overexpressing mouse ကို, တိုးမြှင့်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုတစ်မျိုးဗီဇ mouse ကိုမော်ဒယ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤအကြွက်တွေအတွက်ဆုလာဘ်အချက်ပြ၏အမှတ်အသားများနှစ်ဦးစလုံး Basal နှင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအသောက်များတွင်ထိတွေ့မှု၏6ရက်သတ္တပတ်အောက်ပါဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ကြွက်အကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများဖယ်ရှားရေးဤမော်ဒယ်များ၏အားနည်းချက်အကဲဖြတ်ရန် High-အဆီဓာတ်စာဆုတ်ခွာအောက်ပါတစ်ဦးအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုများတွင်လေ့လာခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များနျူကလိယတလျှောက်ပြောင်းလဲဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း activation accumbens-hypothalamic-ventral နျူကလီးယပ် accumbens နှင့် striatal ဒေသများတွင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ၏ overexpression ကနေရရှိလာတဲ့ tegmental ဧရိယာ circuitry သရုပ်ပြ။ phosphorylated သိသိ adenosine monophosphate (Camp) တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် binding ပရိုတိန်း၏အဆင့်ဆင့် (pCREB), ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် (BDNF), နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် 32 KDA (DARPP-32) ၏မော်လီကျူးအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့်အတူ dopamine နဲ့သိသိ adenosine monophosphate စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် phosphoprotein လျှော့ချ dopamine အချက်ပြရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များ, မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ကြွက်များတွင်လျှော့ချခဲ့သည်။ High-အဆီအစားအသောက်များတွင်ထိတွေ့မှု၏ခြောက်လပတ်ကလုံးဝတစ်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာများ၏အစွမ်းထက်ကြိုးစွမ်းရည်ထုတ်ဖော်ဤကွဲပြားခြားနားမှု ameliorated ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ကြွက်လည်း locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းသိသိသာသာတိုးပြစိုးရိမ်စိတ်-related တုံ့ပြန်မှုမြင့်မားတဲ့ဆီဆုတ်ခွာအောက်ပါနာရီ 24 ။
ဤရလဒ်သည်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာနှင့်အတူပုံမှန်နိုင်ပြီးအဝလွန်အချို့ပုံစံများကိုတစ်ဦး predisposing phenotype ဖြစ်မည်အကြောင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ၏ dysregulation နှင့်ဆက်စပ်သောဆုလာဘ်များနှင့် dopamine အချက်ပြပြောင်းလဲမှုများတစ်ခုနောက်ခံ sensitivity ကိုတည်ထောင်ရန်.
အစာစားချင်စိတ်များနှင့်မွတ်မပြေနိုင်သောထိန်းချုပ်သောအာရုံကြောစနစ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးပွားလာအသိပညာနေသော်လည်း, အဝလွန်ခြင်း၏နှုန်းထားများအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မြင့်တက်နေဆဲဖြစ်သည်။ လက်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုထိရောက်မှုကန့်သတ်ပြီလျှင်, အမူအကျင့်ပြုပြင်မွမ်းမံအနည်းငယ်မျှသာရေရှည်လိုက်နာမှု (1) မှခံရ၏။ ကယ်လိုရီ-သိပ်သည်း, အရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှုထိုကဲ့သို့သောအစားအစာများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများစွမ်းအင်ဟန်ချက်အချက်ပြမှုများ (2-4) override စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, ဦးနှောက်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဆင်တူတဲ့ထုံးစံ၌ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စင်တာများကိုသက်ဝင်သဘာဝကဆုလာဘ်အဖြစ်အဆီလုပ်ရပ်အတွက်မြင့်မားသောအစားအစာများ, နှင့်ကဲ့သို့သော Self-အုပ်ချုပ်ရေး Paradigm (5-8) တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့ကွောငျ့ကျော်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုရှယ်ယာဘုံနောက်ခံယန္တရားများအဘို့အအပြုအမူတွေနဲ့လှုံ့ဆျောမှု, အလားအလာနှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများများအတွက်ကုသမှုလမ်းသစ်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်။
ဦးနှောက်အတွက်ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုထိန်းညှိအရေးပါတယ်လို့အစားအစာများနှင့်လမ်းကြောင်းအကြားဆက်ဆံရေးလေ့လာနေခုနှစ်, ကျွန်တော်အရင်ကလျှော့ဆုလာဘ်၏မော်လီကျူးများနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအမှတ်အသားများဖော်ထုတ်နှင့်အရေးပါတယ်လို့မြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာ (HF) မှဆုတ်ခွာအောက်ပါစိတ်ဖိစီးမှုတိုးလာကြပါပြီ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအလားတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေအတွက်အရေးပါတယ်လို့အစားအသောက်များတွင်ထိတွေ့ခြင်းဟာနျူကလိယ accumbens အတွက်ကူးယူအချက်ΔFosB၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်အတွက်ရလဒ် (NAc), ဗဟိုဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ (9, 10)။ inducibly ΔFosBပြပွဲ overexpress ကြောင့်ကြွက်ဆာပတစ်အစားအစာဆုလာဘ် (11) အတွက်တုံ့ပြန်သူတို့ကိုဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအသောက်များတွင်မော်လီကျူးများနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဆုလာဘ်စနစ်၏ရေရှည် dysregulation ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန်းစစ်ဘို့တန်ဖိုးရှိသော tool ကိုအောင်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဦးအရေးပါတယ်လို့ HF အစားအသောက်များတွင်တုံ့ပြန်မှုအတွက် NAc-hypothalamus-ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) neurocircuitry အတွက်ဆုလာဘ်၏အမှတ်အသားများအတွက်ရေရှည်ပွောငျးလဲဆနျးစစျဖို့ΔFosB-overexpressing ကြွက်အသုံးပြုသွားမည်။ ဤအဆုလာဘ်-အထိခိုက်မခံကြွက်တွေမှာယခင်လေ့လာမှုများအပျေါမှာအခြေခံပြီး, ငါတို့ဆုလာဘ် sensitivity ကိုအတွက်ΔFosB-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများ VTA မှ NAc တုံ့ပြန်ချက်ကနေရရှိလာတဲ့ dopamine အချက်ပြတစ်ဦး dysregulation ပါဝင်ကြောင်းတွေးဆ။ နောက်ထပ်ကျနော်တို့အနေနဲ့စွမ်းအင်သိပ်သည်း HF အစားအစာ၏သဘာဝဆုလာဘ်မှထိတွေ့မှုဖြစ်လျှင်ဤ HF အစားအစာကနေဆုတ်ခွာ၏စိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုပုံကြီးချဲ့တုံ့ပြန်ရရှိလာတဲ့အဲဒီကြွက်တွေအတွက် dopaminergic စနစ်ကပုံမှန်မယ်လို့တွေးဆ။ တစ်ဦးကြိုးပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်အရေးပါတယ်လို့အစားအသောက်များတွင်အသုံးချဖို့၏ထူးခြားသောရှုထောင့်ကိုအကုသမှု-ခံနိုင်ရည်အဝလွန်ခြင်းမှ predisposed လူဦးရေ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်မည်အကြောင်းတစ် phenotype အတွက် circuitry ဆုချဖို့ hypothalamic သွင်းအားစုထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီအယူအဆဆနျးစစျဖို့ကျနော်တို့ pCREB, BDNF နှင့် DARPP-32 အဆိုပါ NAc နှင့် tyrosine hydroxylase နှင့် HF ထိတွေ့ပြီးနောက် VTA အတွက် dopamine ပို့ဆောင်ရေး, အပါအဝင် dopamine neurotransmission ၏အမှတ်အသားများကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွင်း leptin နှင့် orexin receptors အဆိုပါ VTA နှင့် orexin စကားရပ်အပါအဝင် dopamine output ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့လူသိများစွမ်းအင်ဟန်ချက်၏တိကျသောအမှတ်အသားများ, ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
inducibly အဆိုပါ NAc နှင့် dorsal striatum အတွက် dynorphin-အပြုသဘောအာရုံခံ (။ Kelz et al, 1999) တွင်ΔFosB overexpress ကြောင်းအထီး bitransgenic ကြွက်တစ်ဦးရောနှောနောက်ခံ (ICR: C57Bl6 / SJL) ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်တက္ကသိုလ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏အနောက်တောင်ပိုင်း Medical Center မှာမှာထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့် Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အားလုံးကြွက် Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ရောက်ရှိသည်အထိ doxycycline (ထိုသောက်ရေအတွက် 100 μg / ml) ရက်နေ့တွင်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ , overexpression သွေးဆောင် doxycycline ဖယ်ရှားခဲ့သည် (ဎ = 23) (12) ။ ထိန်းချုပ်ရေးကြွက် (ဎ = 26) သည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုလက်ခံရရှိရန်ဆက်ပြောသည်။ ကြွက်အချိန်စကားရပ်လုပျသငျအဆငျ့ (13) ရောက်ရှိဖို့ပြသလျက်ရှိသည်မှာ doxycyline ၏ဖယ်ရှားရေးအောက်ပါရှစ်ပတ်ကြာတဲ့အစားအစာအုပ်စုများမှတာဝန်ကျတယ်။ ကြွက်တစ်ဦး 12 အပေါ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်: 12 အလင်း-မှောင်မိုက်သံသရာ (0700 အပေါ်အလင်းအိမ်) အစားအစာနှင့်မရရှိနိုင်ပါရေကြော်ငြာ libitum အတူ။ အားလုံးလေ့လာမှုများ Pennsylvania ပြည်နယ် Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီတက္ကသိုလ်ကအတည်ပြုစမ်းသပ် protocols များနှင့်အညီဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
ကြွက်အိမ်သူအိမ်သား Chow (ဎ = 16) ရက်နေ့တွင်ထိန်းသိမ်းထားသို့မဟုတ်ခြောက်လပတ် HF (ဎ = 16-17) အပေါ်ထားရှိခဲ့ကြသည်။ အိမ် Chow (Purina Lab ကအစားအသောက်, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို) 4.00% ပရိုတိန်း, 28% ဆီဥ, 12% ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်သည်ဟု, 60 kcal / g ပါရှိသည်။ HF အစားအစာ (သုတေသန Diet, နယူး Brunswick, NJ) 4.73% ပရိုတိန်း, 20% ဆီဥ, 45% ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်သည်ဟု, 35 kcal / g ပါရှိသည်။
ကြွက်အစားအသောက်များတွင်ထိတွေ့မှု၏ခြောက်ပတ်အတွင်းအပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက်ဦးခေါင်းခွံကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်နဲ့အေးစက်နေတဲ့ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲပေါ်တပြင်လုံးကို, သို့မဟုတ် NAc ဖြစ်စေခွဲဖြာ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 0.5 - 1.75 အနက်မှာ bregma ထံမှ 3.5 မီလီမီတာ - 5.5 မီလီမီတာ) နှင့်အရည်နိုက်ထရိုဂျင်အတွက်အေးခဲ။ assayed သည်အထိတစ်သျှူး -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါတယ်။
အနောက်တိုင်းချေဘို့နည်းလမ်းများဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများမှာဖော်ပြထားတဲ့နေကြသည်။ အသုံးပြုတဲ့ပဋိခဲ့ကြသည်: Cdk5, CREB နှင့် BDNF (1: 500, Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ, Santa Cruz,, CA) နှင့် phospho-CREB (pCREB) (SER 133) (1: 500, ဆဲလ် signal နည်းပညာ, Danvers, MA) ။
autoradiography များအတွက်အသေးစိတ်နည်းလမ်းများဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများမှာဖော်ပြထားတဲ့နေကြသည်။ SCH2နှင့်3nm H23390 - - spiperone (PerkinElmer ဘော်စတွန်, MA) ကိုအသုံးပြု Ligands5nm H3 ခဲ့ကြသည်။
situ Hybrid အတွက်
ယခင်က (14) ဖော်ပြထားသကဲ့သို့တစ်ရှူးအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် Hybrid ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ DARPP-32 စုံစမ်းစစ်ဆေးကြင်နာစွာ P. Greengard (Rockefeller တက္ကသိုလ်), နှင့်ဂျေ Elmquist (တက္ကသိုလ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏အနောက်တောင်ပိုင်း Medical Center မှာ) အားဖြင့် orexin စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးခဲ့ပါသည်။ DARPP-32 များအတွက် assayed ဆလိုက်3နေ့ရက်ကာလအဘို့ရိုက်ကူးဖို့ apposed ဖြစ်. , orexin များအတွက် assayed ဆလိုက်4နေ့ရက်ကာလအဘို့ရိုက်ကူးဖို့ apposed ခဲ့ကြသည်။ ရုပ်ရှင်ပုံရိပ်တွေ၏အရေအတွက်သည်ယခင်က (10) ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကောက်ယူခဲ့သည်။
အာအန်အေဟာ VTA ကနေခွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်တစ်ဦးချင်းဗီဇ၏စကားရပ် (အသုံးချ Biosystems, Foster စီးတီး,, CA) TaqMan ဗီဇစကားရပ် assay သုံးပြီးအကဲဖြတ်။ အသေးစိတ်နည်းလမ်းများနှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အစားအသောက်များတွင်-သွေးဆောင်အပြုအမူအပြောင်းအလဲများအပေါ်ဆုလာဘ် sensitivity ကို၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြွက်၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ထိတွေ့မှုလေးပတ်ကအောက်ပါ HF ကနေဆုတ်ခွာနှင့် Chow အမျိုးမျိုးမှပြန်လာသော (ဎ =9ထိန်းချုပ်မှု, ဎ = 8 ΔFosB) ။ ဆုတ်ခွာအောက်ပါနှစ်ဆယ်လေးနာရီ, ကြွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်ကထုတ်ဝေအစားအသောက်ဆုတ်ခွာပါရာဒိုင်း (10) နဲ့အညီပွင့်-Field စမ်းသပ်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ အတိုချုပ်, mouse ကို open-လယ်ကွင်းယန္တရား၏ဗဟို၌ထားငါးမိနစ်စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းလိုင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်, fecal boli, အလယ်ဗဟိုတွင်အချိန်နှင့်ဗဟိုသို့ဖြတ်သန်းသွားသည်ကိုတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။
Western blots မှလွဲ၍ အချက်အလက်အားလုံးကို ANOVA ကို သုံး၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် doxycycline ကုသမှု (osFosB အသုံးအနှုန်း) နှင့်သီးခြားလွတ်လပ်သော variable များအဖြစ်အစားအသောက်အခြေအနေကို Fisher ၏ PLSD စမ်းသပ်မှုဖြင့်လေ့လာခဲ့သည်။ RT-PCR ဆန်းစစ်ခြင်းများအတွက်ဆက်စပ်ဗီဇအုပ်စုများအတွင်းနှိုင်းယှဉ်ချက်များစွာကိုပြင်ဆင်ရန် P တန်ဖိုးလျှော့ချမှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည် (ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ) ။ Western blots များကိုကျောင်းသား၏ t-test ကို doxycycline ကုသမှုအားလွတ်လပ်သော variable တစ်ခုအနေနှင့် အသုံးပြု၍ အတူတူ blot အတွင်း optical သိပ်သည်းဆကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ အားလုံးဒေတာ SEM ±ယုတ်အဖြစ်တင်ပြနေကြသည်။
osFosB-overexpressing ကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်သောဆုလာဘ် sensitivity ကိုအခြေခံသောမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းဖော်ထုတ်ရန်, အများအပြားသော့ချက်အချက်ပြမော်လီကျူး၏အဆင့်ဆင့် NAc အတွက်လေ့လာခဲ့သည်။ doxycycline အပေါ်ထိန်းသိမ်းထား littermate ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ osFosB ကြွက်များ၏ NAc အတွက် Cdk5 တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်များအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်ရှိခဲ့သည် (F = 5.1, P = 0.08; ။ ပုံ 1A) ။ osFosB ကြွက်များသည်သိသိသာသာလျှော့ချသည့် pCREB အဆင့်ဆင့် (F = 7.4, P <0.05; ပုံ ၁ ခ) နှင့် CREB ၏စုစုပေါင်းအဆင့်များ (F = 1, P = 5.4; ပုံ - 0.05C) ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ BDNF အတွက်သိသိသာသာလျှော့ချရေးကိုလည်း osFosB ကြွက်၏ NAc (လေ့လာမှု F ကို 1, P <10.6; ။ ပုံ 0.05D) တွင်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။
ΔFosB overexpressing ကြွက်တွေဟာ NAc အတွက်လျှော့ချ dopamine အချက်ပြ၏ထဲကဓာတုပစ်စညျးအမှတ်အသားများပြသ
ကျနော်တို့နောက်ဆက်တွဲ naturallyFosB- overexpressing ကြွက်တွေမှာမော်လီကျူးအချက်ပြပြောင်းလဲမှုများအပေါ်သဘာဝအကြိုး HF အစားအစာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့သည်။ orFosB ကြွက်များနှင့်အိမ်နှင့် HF တစ်ခုခုတွင်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့် controlsFosB ကြွက်များအကြားကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။ FFosB ကြွက်များနှင့်သက်ဆိုင်သော HF နှင့်ထိတွေ့သည့်အခါခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပုံမှန်ပုံမှန်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုတွင်ယေဘုယျကျဆင်းမှုရှိခဲ့သည် (F = 11.2, P <0.01; Fig ။ 2A) ။ ခြောက်ပတ်အစာအာဟာရရရှိမှုအပြီး HF ကိုလက်ခံသောကြွက်များသည် Chow diet (F = 17.2, P <0.001) ရှိသူများထက်သိသိသာသာပိုမိုများပြားသည်။ 5.6B) ။ ဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှု Chow အစားအစာ (P <0.05) အပေါ်အုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုမှတိကျတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ΔFosB overexpressing ကြွက်ဖြစ်စေ Chow သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအဆီ (HF) အစားအစာအပေါ်အစားအစာစားသုံးမှုအတွက်အဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုပြသ
NAc အချက်ပြအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှု HF အစားအသောက်များတွင်အားဖြင့်ပြောင်းလဲစေခြင်းငှါဘယ်လို Basal ဆုံးဖြတ်ရန်, အခြေခံမှာကိုလေ့လာတူညီတဲ့အချက်ပြပရိုတိန်း HF ခြောက်ပတ်ကလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာခဲ့ကြသည်။ Cdk5 အဆင့်ဆင့် (ပုံ။ 3A) တွင်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်။ pCREB နှင့်စုစုပေါင်း CREB ၏အဆင့်ဆင့် HF (ပုံ။ 3B, C) ၏ခြောက်လပတ်ကြာအပြီးမရှိတော့ကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်။ BDNF ၏အဆင့်ဆင့်သိသိသာသာ HF ထိတွေ့မှု၏ခြောက်လပတ်က (။ , ပုံ 6.5D က F = 0.05, P ကို ​​= 3) အောက်ပါΔFosBကြွက်တွေမှာခြီးမွှောကျခဲ့သညျ။
မြင့်မားသောအဆီ (HF) အစားအသောက်များတွင်ကြွက် overexpressing ΔFosB၏ NAc အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာကွဲပြားမှုအချက်ပြ ameliorated
Dopamine အဲဒီ receptor autoradiography
ကျနော်တို့ NAc အတွက် dopamine အချက်ပြအတွက်ΔFosB-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ် (ပုံ။ 4A) တွင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရှိမရှိအကဲဖြတ်ရန်အဲဒီ receptor autoradiography ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆီဓာတ်မြင့်မားမှုသည် D1 dopamine receptor ၏သိပ်သည်းဆကိုတိုးမြှင့်ပေးသည် (P = 0.14)၊ ဤခြားနားချက်သည် osFosB ကြွက်များ (ပုံ - ၄ ခ) တွင်ပိုမိုကြီးမားသည်။ ထို့အပြင် HF (P = 4) အရ D1 စည်းနှောင်ထားသောinရိယာတိုးလာခြင်းနှင့်၎င်းသည် postFosB ကြွက်များ (P <0.06; ပုံ - ၄ တွင်ကြည့်ပါ။ ) တွင်သိသာထင်ရှားမှုရှိကြောင်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ D0.05 receptors မတူဘဲ, D4 အဲဒီ receptor စည်းနှောင်သိပ်သည်းဆ (အပြောင်းအလဲ Chow = 1 ± 2, ထိန်းချုပ်မှု HF = 97.6 ± 6.9, osFosB Chow = 101.1 ± 8.2, osFosB HF = 91.6 ± 1.0) မပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်စည်းနှောင်areaရိယာ (ထိန်းချုပ်မှု Chow = 94.8 ± 9.5, ထိန်းချုပ်မှု HF = 47.3 ± 3.4, osFosB Chow = 53.8 ± 6.0, osFosB HF = 51.9 ± 3.7) ကို NAc အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
မြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာ (HF) ကြွက် overexpressing ΔFosB၏နျူကလိယ accumbens အတွက် D1 dopamine အဲဒီ receptor binding နှင့် DARPP-32 စကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများ (NAc) မှဦးဆောင်
အဆိုပါ NAc အတွက် DARPP-32 စကားရပ်
in situ hybrid စနစ်ကို NAc ရှိ DARPP-32 ၏ဖော်ပြချက်အဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည် (ပုံ - ၄း၄) ။ အဆီဓာတ်မြင့်မားစွာစားခြင်းသည်ဤ ဦး နှောက်ဒေသ၌ DARPP-4 ဖော်ပြမှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေပြီး (F = 32, P <5.1)၊ dietFosB ကြွက်များနှင့်အတူအစားအစာနှင့် osFosB စကားရပ် (F = 0.05, P <8.9) အကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည် အစားအသောက် - သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှု (ပုံ။ 0.05E) ။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် osFosB ကြွက်များအကြား DARPP-4 စကားရပ်အတွက် Basal ခြားနားချက် post hoc စမ်းသပ်ခြင်း (P <32) နှင့်အဖြစ် HF အပေါ် <FosB ကြွက် (D <0.01) တွင် DARPP-32 စကားရပ်သိသိသာသာတိုးခဲ့သည်။
အဆိုပါ VTA အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်
QRT-PCR သည် VTA တွင်မျိုးရိုးဗီဇဖော်ပြမှုပြောင်းလဲမှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ယခင်ကဆုချီးမြှင့်ခြင်းစည်းမျဉ်းတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သောအဓိကဗီဇများစွာကိုပစ်မှတ်ထားသည်။ အားလုံးနမူနာβ-actin မှပုံမှန်ခဲ့ကြသည်။ β-actin expression ကိုကုသမှုအားဖြင့်မပြောင်းလဲနိုင်စေရန်β-actin ကို GAPDH ၏ဒုတိယအတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်သီးခြား assay ကို run သည်။ β-actin စကားရပ်တွင်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများမရှိပါ။
osFosB စကားရပ်နှင့်အစားအစာကုသမှုအကြားအပြန်အလှန်များအတွက်လမ်းကြောင်းသစ် tyrosine hydroxylase (F = 3.6, P <0.06; ပုံ 5A ။ ) ၏ဖော်ပြချက်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၆ ပတ်ကြာ HF ထိတွေ့မှုကထိန်းချုပ်သောကြွက်များတွင် tyrosine hydroxylase အသုံးအနှုန်းကိုလျော့နည်းစေပြီး osFosB ကြွက်များတွင်ဖော်ပြမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ osFosB စကားရပ်နှင့်အစားအစာထိတွေ့မှုအကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန် dopamine Transporter (F = 6.7, P <0.03; Fig ။ 5B) ၏ဖော်ပြချက်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ tyrosine hydroxylase နှင့်အတူ HF ထိတွေ့မှုကထိန်းချုပ်မှုကြွက်များတွင် dopamine Transporter စကားရပ်ကိုလျော့နည်းစေပြီး osFosB ကြွက်များ (P <0.05) တွင်ထုတ်ဖော်ပြသမှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် osFosB ကြွက်များအကြား dopamine transporter စကားရပ်အတွက် Basal ခြားနားချက်အရေးပါမှုကိုမရောက်ရှိခဲ့ပါဘူး (P = 0.16), ဒါပေမယ့် HF ၏6ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, osFosB ကြွက်ထိန်းချုပ်မှု (P <0.05) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ VTA အတွက်သော့ချက်မော်လီကျူး၏အရေအတွက်စကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများမှဦးဆောင်အမြင့်အဆီဓာတ်စာ (HF) ထိတွေ့မှုနှင့်ΔFosBစကားရပ်
အဆိုပါ VTA အတွက် TrkB အဆင့်ဆင့်လျှော့ချရန်တိုးမြှင့်ΔFosBစကားရပ်တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုညွှန်ပြနေတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်ရှိခဲ့သည် (။ F 5.7, P <0.04; ပုံ 5C) ။ op-opioid အဲဒီ receptor expression ကိုအဓိကသက်ရောက်မှုမရှိပေမယ့် osFosB ကြွက်တွေမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုလျော့နည်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ် (P = 0.08; ပုံ - ၅D ။ P) ။ အဆိုပါ leptin အဲဒီ receptor ၏ဖော်ပြမှုကိုလည်း VTA အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အစားအစာထိတွေ့မှု၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (F = 5, P <6.1), နှင့် HF သည် TAFosB နှင့်ထိန်းချုပ်သည့်ကြွက်များတွင် VTA ရှိ leptin receptor ပမာဏကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးသည် (ပုံ - ၅) ။ အဆိုပါ VTA အတွက် orexin အဲဒီ receptor 0.03 ၏ဖော်ပြမှုကိုလည်းဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အစားအစာ၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုမှာကြွက်များသည် VTA တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်ကိုဖော်ပြသည့် Orexin receptor (F = 5, P <1) ၏ဖော်ပြချက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည် (ပုံ - ၅F) ။ brainFosB ကြွက်များသည်ဤ ဦး နှောက်ဒေသ၌ orexin receptor 9.0 ၏မြင့်မားသောအဆင့်များကိုဖော်ပြရန်လမ်းကြောင်းလည်းရှိသည် (P <0.02) ။
အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက် Orexin စကားရပ်
ကျနော်တို့ in situ hybridization အားဖြင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် hypothalamus အတွက် VTA ၏ orexinergic innervation ၏မူလအစအတွက် orexin အဆင့်ဆင့်တိုင်းတာ (ပုံ။ 6A) ။ HF သိသိသာသာထိန်းချုပ်မှုကြွက် (o <9.1) တွင် orexin အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ΔFosBကြွက်များတွင်ထုတ်ဖော်လျော့နည်းလာနှင့်အတူ osFosB စကားရပ်နှင့် orexin စကားရပ် (F = 0.01, P <0.05) အပေါ်အစားအစာထိတွေ့မှုအကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်ရှိခဲ့သည် (ပုံ။6ခ) ။ Basal ပြည်နယ်တွင် orexin ဖော်ပြမှုတွင်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများမရှိသော်လည်း HF ၆ ပတ်ကြာပြီးနောက် osFosB ကြွက်များသည်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက orexin ပမာဏသိသိသာသာလျော့နည်းကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် (P <6) ။
မြင့်မားသောအဆီ (HF) အစားအသောက်များတွင်ထိန်းချုပ် orexin စကားရပ်အပေါ် differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (Ctrl +) နှင့်ΔFosBကြွက် overexpressing
အစားအသောက်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်နှိုးဆွခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်းကိုအကဲဖြတ်ရန်ကြွက်များသည် (HF) အစားအစာကိုပြန်လည်ထုတ်ယူပြီးနောက် (၂၄) နာရီအကြာတွင် open-field test ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ နှိုးဆော်ချက်တစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ်သွင်းယူခဲ့ကြသောစုစုပေါင်းလိုင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်, သိသိသာသာ osFosB စကားရပ် (F = 24, P <10) နှင့်အစားအသောက်များတွင် (F = 6.6, P <0.05; ပုံ။ 4.6A) ကထိခိုက်ခဲ့သည်။ osFosB ကြွက်များသည်အသစ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အနာများထက် ပိုမို၍ တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ HF မှထုတ်ယူထားသောကြွက်များသည် Chow နှင့်ထိတွေ့သူများ (P <0.05) ထက်သိသိသာသာပိုမိုတက်ကြွကြောင်း post-hoc စမ်းသပ်မှုကဖော်ပြသည်။ Fecal Boli ကိုစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူများ (၁၀) အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ΔFosBစကားရပ် (F = 7, P <0.05) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ osFosB-overexpressing ကြွက်များသည်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်တွင်အထူးသဖြင့်အိမ်အတွင်းရှိမီးဖွားခြင်းနှင့် HF ရုပ်သိမ်းခြင်းအုပ်စုများတွင်ပိုမို fecal boli များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အတူရှိခဲ့သည် (ပုံ - ၇B) ။ F FFB ကြွက်များသည် HF စားသုံးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးစစ်ဆေးမှုမတိုင်မီ ၂၄ နာရီပြန်လည်ရုပ်သိမ်းထားသောသူများထက် fecal boli နည်းပါးသည်။ ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များသည်အစားအစာကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိဟုထင်ရသည်။ ပွင့်လင်းလယ်ပြင်၏အလယ်၌သုံးစွဲအချိန် ofFosB စကားရပ်သို့မဟုတ်အစားအစာဖြစ်စေမသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည် (control chow = 10 ± 10.2 sec, ထိန်းချုပ်မှု HF = 0.01 ±7စက္က, ထိန်းချုပ်မှု W / D ကို = 24 ± 14.5 စက္ကန့, osFosB chow = 3.1 ± 18.0 စက္က, osFosB HF = 3.2 ± 15.4 စက္က, osFosB W / D ကို = 1.9 ± 16.9 စက္က) ။
Over-ဖော်ပြΔFosBမြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာ (HF) ရုပ်သိမ်းရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုထိခိုက်မခံခဲ့ကြသည်ကြွက်
အဝလွန်ခြင်းကုသမှုမှာတော့ကျော်နှင့်အလေးချိန်အမြတ်မှလွယ်ကူစွာထိခိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအချက်များဖော်ထုတ်ခြင်းများအတွက်အရေးပါသောလိုအပ်ချက်ရှိသေး၏။ ဦးနှောက်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းဟာအဘို့လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာများနှင့်အစားအသောက်အပြောင်းအလဲများကို (6, 10, 15, 16) မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ။ orexigenic နှင့် anorexigenic အချက်ပြမှုများကိုတိုက်ရိုက် hypothalamus-VTA-NAc ဆားကစ်ကနေတစ်ဆင့်ဆုလာဘ်အချက်ပြသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သကဲ့သို့, ဆုလာဘ်စင်တာများအတွင်းစွမ်းအင်ကြွယ်ဝအရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှတုံ့ပြန်မှုမျိုးဗီဇ၏ elucidation အဝလွန်ခြင်းကုသမှု (17, 18) တွင်ဝတ္ထုကုထုံးပစ်မှတ်များကိုဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သဆုလာဘ်အတွက်အပြောင်းအလဲများကို (13, 19, 20) ကိုမြှင့်တင်ရန် sensitivity ကိုတစ်မော်ဒယ်အဖြစ်ΔFosB-overexpressing ကြွက်တစ် HF အစားအသောက်များတွင်တုံ့ပြန်မှုအတွက် hypothalamus-VTA-NAc ဆားကစ်တလျှောက်ဆုလာဘ်နှင့်စွမ်းအင်ဟန်ချက်အချက်ပြ၏ထဲကဓာတုပစ်စညျးမြားနှငျ့မော်လီကျူးအမှတ်အသားများလေ့လာ နှင့်အစားအစာဆုတ်ခွာပြီးနောက်အမူအကျင့် sensitivity ကို။ ကျနော်တို့စွမ်းအင်ဟန်ချက်အချက်ပြမှုများ၏လမ်းဆုံနှင့် dopamine system ကိုလွှမ်းခြုံ, ΔFosBကြွက်တွေမှာ dopamine အချက်ပြ၏ Basal dysregulation တစ် HF အစားအစာများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်ပုံမှန်လိမ့်မယ်လို့တွေးဆ။
အဆိုပါ NAc အတွက် dopamine အချက်ပြတစ်ဦး dysregulation ၏ညွှန်ပြအမှတ်အသားများဆနျးစစျဖို့ကျနော်တို့ D1 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်နှင့်မြစ်အောက်ပိုင်း effectors ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ binding D1 အဲဒီ receptor မရှိသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏ပေမယ့်, အဆိုပါΔFosBကြွက်တွေမှာစည်းနှောင်ဧရိယာတိုးမြှင့်ဖို့ HF ထိတွေ့မှုများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်ရှိခဲ့. မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သဘာဆုလာဘ်များကΔFosB၏ induction အဓိကအား D1 receptors ဖော်ပြကြောင်းအလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ dynorphin-အပြုသဘောမျိုးကွဲအတွက်ကိုပြဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်မှပေါ်လာတဲ့အတိုင်းဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် (9, 21) ။ ပစ်မှတ် pCREB အချက်ပြသည့်မြစ်အောက်ပိုင်း dopamine ၏အဆင့်ဆင့်သိသိသာသာဒီဦးနှောက်ဒေသ (1, 22) တွင်လျှော့ချ D23 အဲဒီ receptor activation ထောက်ခံ, ΔFosBကြွက်များတွင်လျှော့ချခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, ငါတို့သည်လည်း pCREB (24) တွင်တစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာလျော့နည်းသွားရာမှရရှိလာတဲ့တုံ့ပြန်ချက်မှအလယ်တန်းဖြစ်မည်အကြောင်း dopamine signal ကို transduction များအတွက်ထပ်မံလျော့ချစွမ်းရည်အကြံပြုခြင်း, ΔFosBကြွက်များတွင်စုစုပေါင်း CREB အဆင့်ဆင့်အတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ။ BDNF စကားရပ် pCREB နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်, D1 activation နှင့်အတူခြီးမွှောကျလျက်, NAc (25, 26) တွင်ဆုလာဘ်-related neuroplasticity ၏အရေးပါသောဖျန်ဖြေဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ΔFosBကြွက်များ၏ NAc အတွက် BDNF ပရိုတိန်းတစ်ခုသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ။
အဆိုပါ NAc အမြန် DARPP-32 (27) တွင်အားလုံးအလတ်စား spiny အာရုံခံ။ ၎င်း၏မြောက်မြားစွာမြစ်အောက်ပိုင်း effectors ကဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း (28) တွင်အရေးပါသောကစားသမားပါစေနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်ခြင်းနှင့် schizophrenia အပါအဝင် dopamine သည့်စနစ်ပါဝင်သောကအခြားရောဂါများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီး (27, 29) ။ ကျနော်တို့ΔFosBကြွက်များ၏ NAc အတွက် DARPP-32 စကားရပ်များတွင်လေးနက် Basal လျှော့ချရှာဖွေတွေ့ရှိ။ DARPP-32 စကားရပ် BDNF နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည်, ထို့ကြောင့်လျှော့ချစကားရပ်ကိုတိုက်ရိုက်ΔFosBကြွက် (27, 29, 30) တွင်တွေ့ရှိ BDNF အဆင့်ဆင့်အတွက်လျှော့ချရန်နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ DARPP-32 ၏ phosphorylation ပြည်နယ်ထဲမှာတောင်မှအလယ်အလတ်ပြောင်းလဲမှုများ NAc (27) အတွင်း intracellular အချက်ပြအတွင်းသိသိသာသာပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ယခင်လေ့လာမှုများΔFosBကြွက်တွေမှာ DARPP-32 ပရိုတိန်းမပြောင်းလဲမှုကိုပိုမိုကျယ်ပြန့် striatal အကဲဖြတ်ကောက်ယူသောအခါ doxycycline နေ 12-wk ဖယ်ရှားရေးကိုအောက်ပါ (31) သတင်းပေးပို့ကြပါပြီ, DARPP-32 အပေါ်ΔFosB၏သက်ရောက်မှုတိကျတဲ့အချိန်နှင့်ဒေသဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုခြင်း။
ကျနော်တို့ဖွယ်ရှိΔFosBကြွက်များ၏ NAc အတွက် dopamine အချက်ပြ၏ညွှန်းကိန်းများတွင်သိသိသာသာလျှော့ချΔFosBသည်ဤအာရုံခံအတွင်း overexpressed သည်မဟုတ်သော်လည်းအဆိုပါ VTA dopamine projection အာရုံခံအတွင်းပါဝင်ပတ်သက်သောအပြောင်းအလဲကြောင့်တွေးဆ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ tyrosine hydroxylase နှင့် dopamine Transporter အပါအဝင် VTA အတွက် dopamine-related မျိုးဗီဇ၏စကားရပ်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ tyrosine hydroxylase နှင့် dopamine ပို့ဆောင်ရေးအဆင့်ဆင့်အပြုသဘော dopamine output ကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြသည်။ လျှော့ tyrosine hydroxylase နှင့် dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသိသိသာသာလျှော့ချရေးပြမှΔFosBကြွက်များအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်အတွက် NAc အတွက် dopamine အချက်ပြ၏ dysregulation နှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်ရှိခဲ့သည်. ΔFosBကြွက်များ၏ VTA အတွက် dopamine-related မျိုးဗီဇတွင်ဤ Basal လျှော့ချယူဆရရေရှည်ΔFosB overexpression စဉ်အတွင်း NAc ကနေပြောင်းလဲတုံ့ပြန်ချက်ကိုထင်ဟပ်အဖြစ်ကျနော်တို့ VTA (32) မှ NAc တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သောယန္တရားအဖြစ်, TrkB, အ BDNF အဲဒီ receptor ၏စကားရပ်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ hydroxylase နှင့် dopamine Transporter tyrosine နဲ့ဆင်တူ, TrkB စကားရပ်ကိုလည်း Basal မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်ဘို့အတညျ့သောအခါအဓိပ်ပာယျမရောက်နိုင်ဘူးကြောင်းΔFosBကြွက်များတွင်လျှော့ချခံရဖို့တစ်လမ်းကြောင်းသစ်ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ BDNF-TrkB ရှုပ်ထွေး retrogradely ပို့ဆောင်နှင့်ဒေသခံဗီဇစကားရပ်ကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်ဆဲလ်ကြီးထွားမှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (33) မြှင့်တင်ရန်အတွက် VTA အတွင်းပြုမူနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်အဆိုပါ NAc အတွင်း presynaptic TrkB ၏ BDNF activation တိုက်ရိုက်ထိုအကြွက်တွေမှာ dopamine အချက်ပြ၏နောက်ခံ ပတျသကျ. အလှနျသေးနု supporting, dopamine neurotransmission (32) ကိုလှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်။
κ-opioid receptors ၏ Dynorphin activation dopamine အချက်ပြထိန်းညှိခြင်းနှင့် NAc အဆိုပါ VTA မှတုံ့ပြန်ချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးခွအခြားယန္တရားဖြစ်ပါသည် (34) ။ ကျနော်တို့ VTA အတွက်κ-opioid အဲဒီ receptor စကားရပ်ΔFosBကြွက်များတွင်လျှော့ချခံရဖို့တစ်လမ်းကြောင်းသစ်ပြတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ΔFosB overexpression အဆိုပါ NAc (20) တွင် dynorphin စကားရပ်ကိုလျော့ချဖို့ပြသခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း, ΔFosBကြွက်ဖွယ်ရှိအသားတင် VTA အတွက်လေးနက်လျှော့ချရှိκ-opioid activation ။ dynorphin အချက်ပြခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် dopamine neurons (35) ကိုတားဆီးနိုင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော်လည်းအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမိမိကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကိုပြသည့်ကြွက်များသည် NAc ရှိ dynorphin ပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အခြေခံအားဖြင့်လျှော့ချလိုက်သော dynorphin အချက်ပြမှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသသည်။ , 36) ။ Dororphin-io-opioid စနစ်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမသတ်မှတ်ခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်ဇွဲရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး dopamine လမ်းကြောင်းများပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းတွင် opioid အချက်ပြမှု၏အရေးပါသောချိန်ခွင်လျှာကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ (38) ။
တစ်ဦးစွမ်းအင်သိပ်သည်း HF အစားအစာများ၏အကြိုးစွမ်းရည်အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ΔFosBကြွက်များတွင်အချက်ပြတဲ့ dopamine အတွက် dysregulation နှင့် opioid ဆုလာဘ်အရှင် hypothalamus ၏ activation မှတဆင့်အကျိုးကိုစနစ်ကပုံမှန်, ထိုကဲ့သို့သောအစားအသောက်များတွင်တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုဤကြွက် predispose မယ်လို့တွေးဆ -VTA-NAc circuit ကို။ ခြောက်နိုင်ငံရက်သတ္တပတ်အစားအသောက်များတွင်ထိတွေ့စဉ်အတွင်းΔFosBနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်အကြားအစားအစာစားသုံးမှုအတွက်အဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုΔFosBကြွက်တွေအတွက်ဆုလာဘ်အချက်ပြ၏ထဲကဓာတုပစ်စညျးမြားနှငျ့မော်လီကျူးအမှတ်အသားများ၌တွေ့ပြောင်းလဲမှုများစားသုံးသည့်ကယ်လိုရီအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်မဟုတ်ကြကြောင်းအကြံပြု, လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ မျှော်လင့်သည့်အတိုင်း pCREB, စုစုပေါင်း CREB တွေ့ရှိ Basal ကွဲပြားမှု, ΔFosBနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်အကြား BDNF, DARPP-32 နှင့်κ-opioid အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်ကြောင့် HF အပေါ်ΔFosBကြွက်တွေမှာတိုးလာ dopamine output ကို (29, 39-41) အား, ဖွယ်ရှိ attenuated ခဲ့ကြသည် ။
tyrosine hydroxylase နှင့် VTA အတွက် dopamine Transporter နှစ်ဦးစလုံး၏စာမေးပွဲ HF အောက်ပါΔFosBနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များ၏အံ့သြစရာဆန့်ကျင်တုံ့ပြန်မှုထင်ရှား. ΔFosBကြွက်ကဤ dopamine-related ဗီဇနှစ်ခုလုံး၏တိုးမြှင့်စကားရပ်ကိုပြသနေစဉ်ထိန်းချုပ်ရေးကြွက်, tyrosine hydroxylase နှင့် dopamine Transporter စကားရပ်ထဲမှာကျဆင်းခြင်းပြသခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ tyrosine hydroxylase စကားရပ်ΔFosBကြွက်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်တွေထက် HF ၏သဘာဝဆုလာဘ်ပိုပြီးအဓိကရှာတွေ့စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, နာတာရှည်ကင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေး (42-44) အားဖြင့် VTA အတွက်ပြောင်းလဲနေသည်။
အဆိုပါ VTA မှ hypothalamic input ကိုစွမ်းအင်ဟန်ချက်ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းအချက်ပြ relaying စေခြင်းငှါဘယ်လိုအလားအလာဆန်းစစ်ရန်အလို့ငှာခုနှစ်, leptin အဲဒီ receptor နှင့် orexin အဲဒီ receptor-1 ၏စကားရပ်ကိုလည်းလေ့လာခဲ့ကြသည်။ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ leptin အဆင့်ဆင့် (18, 45) အချက်ပြ dopamine ပြောင်းလဲပစ်ရန် HF တိုးနှင့် leptin အဆိုပါ VTA မှာအလှည့်လုပ်ရပ်အတွက်တတ်နိုင်သမျှနေကြသည်။ VTA leptin အဲဒီ receptor စကားရပ်အလားတူ HF အပေါ်နေချိန်မှာအလားတူကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်ΔFosBနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် HF အားဖြင့်ယုတ်လျော့ခဲ့သည်။ အမြင့်အဆီလည်းΔFosBနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်နှစ်ဦးစလုံး၏ VTA အတွက် orexin အဲဒီ receptor-1 ၏စကားရပ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ Orexin VTA plasticity အားပေးအားမြှောက်သဖြင့်, NAc (46-48) တွင် dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးပွါး, ထို VTA အတွက် dopamine အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်။ မြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက် (49, 50) နဲ့အညီ, ကြွက်များတွင် orexin စကားရပ်တိုးမြှင့်ပြသလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် orexin အဲဒီ receptor ၏စကားရပ်တိုးမြှင့်အဖြစ် VTA အတွက် leptin အချက်ပြပြောင်းလဲမှုများစွမ်းအင်ဟန်ချက်အချက်ပြမှုများနှင့်ဆုချမှတိုက်ရိုက်ချည်ထားသောသူတို့အား relaying လမ်းကြောင်းများအကြားတစ်ဦး dissociation supporting, ΔFosBနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အစားအစာဆုလာဘ်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ဘူး။
ဆုလာဘ်ဆုတ်ခွာ၏ဖိစီးမှုကိုလှုံ့ဆျောသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ရန်, ကြွက် HF ၏ဖယ်ရှားရေးအောက်ပါ open-လယ်ပြင်စမ်းသပ်မှု 24 နာရီအတွင်းလေ့လာခဲ့ကြသည်။ ΔFosBကြွက်ရှိသမျှသည်အခြားသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အစားအစာအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြင့် arousal လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဝတ္ထုပွင့်လင်းနယ်ပယ်တွင် fecal boli ထုတ်လုပ်မှုဖေါ်ပြခြင်း, ပိုမိုနှစ်သက်အစားအသောက်များတွင်ဆုတ်ခွာ၏စူးရှသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုထိခိုက်မခံခဲ့ကြသည်။ ΔFosBကြွက်လည်း HF အစားအသောက်များတွင်ပိုင်းတွင် Chow မှ fecal boli ထုတ်လုပ်မှုဆွေမျိုးလျှော့ချနှင့်ဆုတ်ခွာနောက်တဖန်ဒီစိုးရိမ်စိတ်-related တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်အတူဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု sensitivity ကိုရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များကိုဤစမ်းသပ်မှုတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့အပြုအမူပုံစံပြသခဲ့သည်။ ဒါဟာပွင့်လင်း-Field လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးမျှသာ orexin-mediated အချက်ပြပြောင်းလဲမှုများတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုမဟုတျကွောငျးစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် arousal မှဆက်ဆံရေးအကြံပြုခြင်း, orexin စကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူမပတျသကျဘူးလေ့လာသည်။ ယေဘုယျအားဤဒေတာΔFosBကြွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ကြီးထွားဆုလာဘ် sensitivity ကိုမှနှစ်သက်အစားအသောက်များတွင်ဆုတ်ခွာ၏စူးရှသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုထိခိုက်မခံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆကိုထောကျပံ့.
ဘယ်လိုအပြုအမူနှင့်ဆုလာဘ်အချက်ပြထိုသို့သောအပြောင်းအလဲများဖို့ NAc ခဲထဲမှာΔFosB၏ရေရှည် overexpression မ? အဆိုပါ NAc နှင့် hypothalamus ကနေပြောင်းလဲတုံ့ပြန်ချက်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း dysregulation နှင့်အဝလွန်ခြင်း (ပုံ။ 8) အားတစ်ဦးဓာတ်အကြားတစ်ဦး link ကိုထောကျပံ့ပေးစေခြင်းငှါ၎င်း dopamine စနစ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဆုလာဘ်ပြည်နယ်နှင့်စပ်လျဉ်းအချက်ပြမှုများကိုထပ်ဆင့်လွှင်ကျသောကျနော်တို့ VTA တော့သည်ထောက်လှမ်းတဲ့မော်ဒယ်အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ HF ထိတွေ့စဉ်အတွင်းစွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာနှင့်ဆုလာဘ်ပြည်နယ်နှစ်ခုလုံးကိုထင်ဟပ်မျိုးစုံသွင်းအားစုအတွက် VTA အပေါ်ဆုံ။ အချက်ပြ leptin နှင့် orexin အတွက်တိုးအဖြစ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ဖို့ NAc ကနေပြောင်းလဲတုံ့ပြန်ချက်သည်ဤ orexigenic အချက်ပြမှုများအဆိုပါΔFosBကြွက် (17, 18, 45, 47, 51-53) တွင် HF တုံ့ပြန်ပုံကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ BDNF အတွက်မြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာကုထုံးတွေမြင့်တက်နောက်ထပ် dopamine-related ဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများမြှင့်တင်ရန်, အ VTA မှဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ချက်များကိုဖြစ်နိုင်သည်။
မြင့်မားသောအဆီ (HF) အစားအသောက်များတွင်ΔFosBကြွက်တွေမှာ dysregulated ဆုလာဘ်အချက်ပြပုံမှန်
ဤရလဒ်သည်ဆုလာဘ် sensitivity ကို၏မော်လီကျူးအမှတ်အသားများ delineate နှင့် dopamine စနစ်၏ရေရှည် dysregulation စွဲနှင့်အဝလွန်ခြင်းမှတစ်ဦးချင်း predispose စေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။ နောက်ထပ်အဲဒီဒေတာအဝလွန်ခြင်း၏ကုသမှုနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အလားအလာသစ်ကိုကုထုံးပစ်မှတ်နှင့်အကျိုးကို system ပေါ်တွင်အဓိကထားစေခြင်းငှါအခြားအပုံမမှန်ကိုဖျောထုဆီသို့အရေးပါသောခြေလှမ်းသည်။ အနာဂတျမှာ, ဒီစနစ်က HF အစားအသောက်များတွင်၏ဖယ်ရှားရေးတုံ့ပြန်မှုကိုဘယ်လိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အဖြစ်အဆီအစားအသောက်များတွင်ထိတွေ့ဆုချနှင့်မြင့်မားဖို့ sensitivity ကိုအတွက်မဆိုလိင်ကွဲပြားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Supp ။ နည်းလမ်းများ
ကြည့်ရှုရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။ (61K, doc)
အဆိုပါစာရေးဆရာတိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့်အပြောင်းအရွှေ့နှင့်အတူအကူအညီအတွက် Cathy Steffen ကျေးဇူးတင်ဖို့အလိုရှိ၏။ ဤလုပ်ငန်းကိုတက္ကသိုလ် Pennsylvania ပြည်နယ်၏ဆီးချိုရောဂါစင်တာ (DK019525) မှတစ်ဦးထောက်ပံ့ငွေအားဖြင့်၎င်း, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (R01 DA51399) ရက်နေ့တွင်စိတ်ကျန်းမာရေး (R50 MH66172 နှင့် P01 MH07359) နှင့်အမျိုးသား Institute ၏အမျိုးသားအင်စတီကျုကနေထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်။
ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ဖော်: အားလုံးစာရေးဆရာများသူတို့သည်နောက်ပြီးတော့ biomedical ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားအလားအလာပဋိပက္ခများကိုရှိသည်သောကြေညာ။
1 ။ ဝါဒန်က TA, Berkowitz RI က, Womble LG က, Sarwer DB, Phelan က S, Cato RK, Hesson LA က, Osei SY, Kaplan R ကို, Stunkard AJ ။ အဝလွန်များအတွက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် pharmacotherapy ၏ကျပန်းရုံးတင်စစ်ဆေး။ N ကို Engl J ကို Med ။ 2005; 353 (20): 2111-20 [PubMed] ။
2 ။ လူ့နှင့်မောက်စ်အတွက် Cross-နှိုင်းယှဉ်: Blendy ဂျာ Strasser တစ်ဦးက, Walters က CL, Perkins Ka, ပက်တာက F, Berkowitz R ကို, Lerman C. အဝလွန်ခြင်းအတွက်နီကိုတင်းဆုလာဘ်လျှော့ချ။ Psychopharmacology (Berl) 2005
3 ။ Franken ih, ဆုလာဘ် sensitivity ကိုအတွက် Muris P. တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကျန်းမာအမျိုးသမီးတွေအတွက်အစားအစာတဏှာနှင့်ဆွေမျိုးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ အစာစားချင်စိတ်။ 2005; 45 (2): 198-201 [PubMed] ။
4 ။ ကယ်လီ AE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများမှဆက်စပ်မှု: သဘာဝအလျောက်ဆုလာဘ်၏ neuroscience ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22 (9): 3306-11 [PubMed] ။
5 ။ Cagniard B က, ဗာလစံ PD, Brunner: D, လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်နာတာရှည်မွငျ့မား dopamine ပြပွဲနှင့်အတူ Zhuang X တို့မှာကြွက်တွေကကားအစားအစာဆုလာဘ်အဘို့, သင်ယူခြင်းမဟုတ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31 (7): 1362-70 [PubMed] ။
6 ။ Liang NC, Hajnal တစ်ဦးက, Norgren R. Sham ပြောင်းဖူးရေနံတိုးအစာကျွေးကြွက်များတွင် dopamine accumbens ။ Integrated comp Physiol စည်းမျဉ်း J ကို Physiol ဖြစ်၏။ 2006; 291 (5): R1236-9 [PubMed] ။
7 ။ Mendoza J ကို, Angeles မြို့-Castellanos M က, Escobar C. Entrainment တစ်အရေးပါတယ်လို့မုန့်ညက်အားဖြင့်ဦးနှောက်၏ဆုလာဘ်-related ဒေသများရှိအစားအစာ-anticipatory လှုပ်ရှားမှုနဲ့ c ကို-Fos စကားရပ်ဖြစ်ပေါ်သည်။ neuroscience ။ 2005; 133 (1): 293-303 [PubMed] ။
8 ။ Schroeder, Binzak JM, ကယ်လီ AE BE ။ nicotine- ထိတွေ့သို့မဟုတ်ချောကလက်-ဆက်စပ် Contextual တွေကိုအောက်ပါ prefrontal cortical activation တစ်ဘုံပရိုဖိုင်း။ neuroscience ။ 2001; 105 (3): 535-45 [PubMed] ။
9 ။ Nestler EJ, Barrot M က, ကိုယ်ပိုင် DW ။ DeltaFosB: စွဲတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2001; 98 (20): 11042-6 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ Teegarden SL, ဘေးလ် TL ။ အစားအသောက် relapse အဘို့အစိတ်ပိုင်းများနှင့်စွန့်စားမှုတိုးလာအစားအသောက် preference ကိုအသီးအနှံအတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 61 (9): 1021-9 [PubMed] ။
11 ။ Olausson P ကို, Jentsch JD, Tronson N ကို, Nestler EJ, တေလာ JR ။ နျူကလီးယပ် Accumbens အတွက် dFosB အစားအစာစစ်ကူတူရိယာဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် Motivation ထိန်းညှိ။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 2006; 26 (36): 9196-9204 [PubMed] ။
12 ။ Chen က J ကို, Kelz ကို MB, Zeng, G, Sakai က N ကို, Steffen ကို C, Shockett PE, Picciotto MR, Duman RS, Nestler EJ ။ ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင်, ပစ်မှတ်ထားဗီဇစကားရပ်နှင့်အတူ Transgene တိရိစ္ဆာန်များ။ Mol Pharmacol ။ 1998; 54 (3): 495-503 [PubMed] ။
13 ။ Kelz ကို MB, Chen က J ကို, Carlezon WA, Jr က Whisler K ကို Gilden L ကို, Beckmann လေး, Steffen ကို C, Zhang က YJ, Marotti L ကို, ကိုယ်ပိုင် DW, Tkatch T က, Baranauskas, G, Surmeier DJ သမား, Neve RL, Duman RS, Picciotto MR, Nestler EJ ။ ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက် deltaFosB ၏ expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ။ 1999; 401 (6750): 272-6 [PubMed] ။
14 ။ ဘေးလ် TL, Dorsa DM ။ အဆိုပါ ventromedial hypothalamus အတွက် oxytocin အဲဒီ receptor တမန် ribonucleic အက်ဆစ်စကားရပ်အပေါ်အီစရိုဂျင်နှင့်သက်ရောက်မှုများတွင်လိင်ကွဲပြားမှု။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1995; 136 (1): 27-32 [PubMed] ။
15 ။ Avena မိုင်, Long က ka, Hoebel BG ။ တစ်သကြားဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအထောက်အထား: သကြား-မှီခိုကြွက်နေကြပြီးသကြားအဘို့တုံ့ပြန်တိုးမြှင့်ပြသပါ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005; 84 (3): 359-62 [PubMed] ။
16 ။ အလိုတော် MJ, Franzblau eb, ကယ်လီ AE ။ နျူကလိယ mu-opioids တစ်ဦးဖြန့်ဝေဦးနှောက်ကွန်ယက်ကို Activation မှတဆင့်တစ်ဦးက high-အဆီအစားအစာ၏စားသုံးမှုထိန်းညှိ accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23 (7): 2882-8 [PubMed] ။
17 ။ Zheng H ကို, ပက် LM, Berthoud HR ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ Orexin အချက်ပြသည့်နျူကလိယ accumbens ၏ opioid ဆွခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် High-အဆီအစာစားချင်စိတ်အဘို့လိုအပ်ပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27 (41): 11075-82 [PubMed] ။
18 ။ Hommel JD, Trinko R ကို, Sears RM, Georgescu: D, လျူ ZW, Gao xB, Thurmon JJ, Marinelli M က, DiLeone RJ ။ midbrain dopamine အာရုံခံအတွက်အချက်ပြ Leptin အဲဒီ receptor နို့တိုက်ကျွေးရေးထိန်းညှိ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 51 (6): 801-10 [PubMed] ။
19 ။ Colby CR, Whisler K ကို Steffen ကို C, Nestler EJ, ကိုယ်ပိုင် DW ။ DeltaFosB ၏ Striatal ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ overexpression ကင်းဘို့မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23 (6): 2488-93 [PubMed] ။
20 ။ Zachary V ကို, Bolanos, CA, Selley DE, Theobald: D, Cassidy အမတ်, Kelz ကို MB, Shaw-Lutchman T က, Berton အို Sim-Selley LJ, Dileone RJ, Kumar ကတစ်ဦး, Nestler EJ ။ မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB များအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ နတ် neuroscience ။ 2006;9(2): 205-11 [PubMed] ။
21 ။ Lee က KW ကင်မ် Y ကိုကင်မ်လေး, Helmin K ကို Nairn AC အ, နျူကလိယ accumbens အတွက် D1 နှင့် D2 dopamine အဲဒီ receptor ပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် Greengard P. ကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2006; 103 (9): 3399-404 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ Blendy ဂျာမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ Maldonado R. မျိုးဗီဇခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: Camp တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် binding ပရိုတိန်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို Mol Med ။ 1998; 76 (2): 104-10 [PubMed] ။
23 ။ Nestler EJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 1: 24-32 [PubMed] ။
24 ။ Tanis KQ, Duman RS, နယူတန်အက်စ်အက်စ်။ CREB ဦးနှောက်အတွက် binding နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်: Electroconvulsive ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြင့်ဒေသဆိုင်ရာတိကျတဲ့နှင့် induction ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007
25 ။ Kumar ကတစ်ဦး, Choi KH, Renthal W က, Tsankova မိုင်, Theobald DE, Truong HT, Russo SJ, Laplant မေး, Sasaki TS, Whistler KN, Neve RL, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ ။ Chromatin ပြုပြင် striatum အတွက်ကင်း-သွေးဆောင် plasticity အခြေခံအဓိကယန္တရားသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 48 (2): 303-14 [PubMed] ။
26 ။ ဂရေဟမ် DL, Edwards က S နဲ့, Bachtell RK, Dileone RJ, Rios M က, ကိုယ်ပိုင် DW ။ ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူနျူကလိယ accumbens အတွက် dynamic BDNF လှုပ်ရှားမှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် relapse တိုးပွားစေပါသည်။ နတ် neuroscience ။ 2007; 10 (8): 1029-37 [PubMed] ။
27 ။ Svenningsson P ကို, Nairn AC အ, Greengard P. DARPP-32 အလွဲသုံးစားမှုမျိုးစုံမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လုပ်ရပ်များ mediates ။ Aaps ဂျေ 2005;7(2): E353-60 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ Palmer က AA ကို, Verbitsky M က, Suresh R ကို, Kamen HM, ရိဒ် CL, Li က N ကို, Burkhart-Kasch S က, McKinnon CS, Belknap JK, Gilliam TC, Phillips ကတီဂျေ။ မတူကွဲပြားစိတ်ကြွဆေး sensitivity ကိုရွေးချယ်ကြွက်များတွင်မျိုးဗီဇစကားရပ်ကွဲပြားခြားနားမှု။ Mamm ဂြီနို။ 2005; 16 (5): 291-305 [PubMed] ။
29 ။ Bogush တစ်ဦးက, Pedrini S က, Pelta-Heller J ကို, ချမ်း T က, ယန်မေး, မော်စီတုန်း Z ကို, Sluzas အီး, Gieringer T က, Ehrlich ME ။ AKT နှင့် CDK5 / p35 စသည်တို့အတွက်အလတ်စားအရွယ်အစား spiny အာရုံခံအတွက် DARPP-32 ၏ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် induction ဖျန်ဖြေ။ J ကို Biol Chem ။ 2007; 282 (10): 7352-9 [PubMed] ။
30 ။ Benavides DR, Bibb ဂျေအေ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် plasticity အတွက် Cdk5 ၏အခန်းက္ပ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004; 1025: 335-44 [PubMed] ။
31 ။ Bibb ဂျာ Chen က J ကို, တေလာ JR, Svenningsson P ကို, Nishi တစ်ဦးက, Snyder GL, ယန် Z ကို, Sagawa ZK, Ouimet CC ကို, Nairn AC အ, Nestler EJ, Greengard P. အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကင်းမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု၏အာရုံခံပရိုတိန်း Cdk5 နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ သဘာဝ။ 2001; 410 (6826): 376-80 [PubMed] ။
32 ။ Blochl တစ်ဦးက, Sirrenberg C. Neurotrophins Trk နှင့် p75Lntr receptors မှတဆင့်ကြွက် mesencephalic အာရုံခံထံမှ dopamine များလွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်ခြင်း။ J ကို Biol Chem ။ 1996; 271 (35): 21100-7 [PubMed] ။
33 ။ Berton အို McClung, CA, Dileone RJ, Krishnan V ကို, Renthal W က, Russo SJ, ဂရေဟမ်, D, Tsankova မိုင်, Bolanos, CA, Rios M က, Monteggia LM, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ ။ လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုအတွက် mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းအတွက် BDNF ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ။ 2006; 311 (5762): 864-8 [PubMed] ။
34 ။ Nestler EJ, Carlezon WA ။ , Jr စိတ်ကျရောဂါအတွက် mesolimbic dopamine ဆုလာဘ် circuit ကို။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 59 (12): 1151-9 [PubMed] ။
35 ။ Ford ကားက CP, Beckstead MJ, Williams က JT ။ somatodendritic dopamine inhibitory postsynaptic ရေစီးကြောင်း၏ Kappa opioid တားစီး။ J ကို Neurophysiol ။ 2007; 97 (1): 883-91 [PubMed] ။
36 ။ Nylander ငါ Vlaskovska M က, Fischer နှင့် Lewis ကကြွက်များတွင် Terenius အယ်လ်ဦးနှောက် dynorphin နှင့် enkephalin စနစ်များ: မော်ဖင်းအကိုက်သည်းခံစိတ်နဲ့ဆုတ်ခွာ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1995; 683 (1): 25-35 [PubMed] ။
37 ။ Nylander ငါ Hyytia P ကို, Forsander အို prodynorphin နှင့် proenkephalin စနစ်များအတွက်အရက်- သာ. နှစ်သက်တို့အကြား Terenius အယ်လ်ကွာခြားချက်များ (AA ကို) နှင့်အရက်-ရှောင်ရှား (ANA) ကြွက်များ။ အရက် Clin Exp Res ။ 1994; 18 (5): 1272-9 [PubMed] ။
38 ။ Kreek MJ ။ ကိုကင်း, dopamine နှင့် endogenous opioid စနစ်။ J ကိုစွဲ dis ။ 1996; 15 (4): 73-96 [PubMed] ။
39 ။ Carlezon WA, Jr က Duman RS, Nestler EJ ။ CREB ၏များစွာကိုမျက်နှာများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2005; 28 (8): 436-45 [PubMed] ။
40 ။ Dudman JT, Eaton ME, Rajadhyaksha တစ်ဦးက, Macias W က, Taher M က, Barczak တစ်ဦးက, Kameyama K ကို Huganir R ကို, Konradi C. Dopamine D1 receptors Ser897-NR1 မှာ NMDA အဲဒီ receptor ၏ phosphorylation မှတဆင့် CREB phosphorylation ဖျန်ဖြေ။ J ကို Neurochem ။ 2003; 87 (4): 922-34 [PubMed] ။
41 ။ ကိုယ်ပိုင် DW ။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ် neuroadaptations နေဖြင့်မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေနှင့် -seeking အပြုအမူတွေ၏စည်းမျဉ်း။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 1: 242-55 [PubMed] ။
42 ။ Beitner-Johnson က D:, Nestler EJ ။ မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ကိုကင်း dopaminergic ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသများတွင် tyrosine hydroxylase အပေါ်ဘုံနာတာရှည်လုပ်ရပ်များကြိုးပမ်းနေကြတယ်။ J ကို Neurochem ။ 1991; 57 (1): 344-7 [PubMed] ။
43 ။ lu, L, Grimm JW, Shaham Y ကို, မျှော်လင့်ခြင်း BT ။ ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေအတင်းအဓမ္မ abstinence ၏ပထမဦးဆုံး 90 ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်း accumbens နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ molecular neuroadaptations ။ J ကို Neurochem ။ 2003; 85 (6): 1604-13 [PubMed] ။
44 ။ Shepard JD, Chuang ၎င်းကို, Shaham Y ကို, စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး Morales အမ် Effect ကြွက်၏ mesolimbic နှင့် nigrostriatal dopamine လမ်းကြောင်းအတွက် tyrosine hydroxylase နှင့် dopamine Transporter အဆင့်ဆင့်ပေါ်မှာ။ Psychopharmacology (Berl) 2006; 185 (4): 505-13 [PubMed] ။
45 ။ Fulton က S, Pissios P ​​ကို, Manchon RP, Stiles L ကို, ဖရန့် L ကို, Pothos မာခ်, Maratos-လက်ကမ်းကြော်ငြာတွေ, E, လက်ကမ်းကြော်ငြာတွေ JS ။ အဆိုပါ mesoaccumbens dopamine လမ်းကြောင်း၏ Leptin စည်းမျဉ်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 51 (6): 811-22 [PubMed] ။
46 ။ နာရီတာ M က, Nagumo Y ကို, Miyatake M က, Ikegami: D, Kurahashi K ကို extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်နှင့်၎င်း၏အကြိုးသက်ရောက်မှုများ orexin-သွေးဆောင်မြင့်အတွက်ပရိုတိန်း kinase C ၏ဆူဇူကီးတီဂယက်ရိုက်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007; 25 (5): 1537-45 [PubMed] ။
47 ။ နာရီတာ M က, Nagumo Y ကို, Hashimoto က S, Khotib J ကို, Miyatake M က, Sakurai T က, Yanagisawa က M, Nakamachi T က, Shioda S ကိုမော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏ activation အတွက် orexinergic စနစ်များဆူဇူကီးတီတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26 (2): 398-405 [PubMed] ။
48 ။ Borgland SL, Taha လုပ် SA, Sarti က F, Fields HL, အ VTA အတွက် Bonci အေ Orexin တစ်ဦးကင်းမှ Synaptic plasticity နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကဲဆတ်ခြင်း induction ဘို့အရေးကြီးသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 49 (4): 589-601 [PubMed] ။
49 ။ ပန်းခြံ ES, ရီ SJ ကင်မ် JS, Lee က HS, Lee က IS, Seong JK, Jin ကဟောင်ကောင်, Yoon YS ။ အဆိုပါအစာရှောင်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာကျွေးသောကြွက်၏ hypothalamus အတွက် orexin-A နှင့် neuropeptide Y ကိုစကားရပ်များတွင်အပြောင်းအလဲများ။ J ကို VET သိပ္ပံ။ 2004;5(4): 295-302 [PubMed] ။
50 ။ Wortley Ke, Chang က GQ, Davydova Z ကို, Leibowitz SF ။ အစားအစာစားသုံးမှုထိန်းညှိကြောင်း Peptides: orexin ဗီဇစကားရပ် hypertriglyceridemia ၏ပြည်နယ်များစဉ်အတွင်းတိုးလာနေပါတယ်။ Integrated comp Physiol စည်းမျဉ်း J ကို Physiol ဖြစ်၏။ 2003; 284 (6): R1454-65 [PubMed] ။
51 ။ Zheng H ကို, Corkern M က, Stoyanova ငါပက် LM, Tian R ကို, Berthoud HR ။ အစားအစာစားသုံးမှုထိန်းညှိကြောင်း Peptides: အစာစားချင်စိတ်-inducing accumbens ကိုင်တွယ် hypothalamic orexin အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် POMC အာရုံခံဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Integrated comp Physiol စည်းမျဉ်း J ကို Physiol ဖြစ်၏။ 2003; 284 (6): R1436-44 [PubMed] ။
52 ။ Baldo BA, Gual-Bonilla L ကို, Sijapati K သည်ဒံယေလ RA, Landry CF, ကယ်လီ AE ။ ယင်းနျူကလိယ၏ဂိဗာမွို့အဲဒီ receptor-mediated တားစီးနေဖြင့် orexin / hypocretin ပါဝင်သော hypothalamic အာရုံခံတစ် subpopulation ၏ activation shell ကို accumbens, ဒါပေမယ့်မဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့သည်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2004; 19 (2): 376-86 [PubMed] ။
53 ။ Harris က GC, Wimmer M က, ဆုလာဘ်ရှာအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic orexin အာရုံခံအဘို့အ Aston-Jones ဟာဂျီတစ်ဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 2005; 437 (7058): 556-9 [PubMed] ။